Ukuphupha isikhululo seRhasi Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ️
Ukuba imoto ithetha ukuzimela kunye nokuhamba kuthi, isikhululo segesi kubalulekile ukugcina ukuqhubela phambili. Yeha kwabo baxakeke kwindlela engasese yasemaphandleni okanye kuhola wendlela ongenanto!
Kuqhelekile ukuba isikhululo segesi esikumabala emibalabala sibonakale njengohlangulo kwimfuno enkulu. Kodwa ayisiyomoto okanye iphenyane eligcwele amafutha kuphela, sikwasoloko sifumana into eselwayo, i-snack okanye i-ice cream kwisikhululo segesi ukuzomeleza kuhambo. Ngeeholide naphakathi kobusuku, izikhululo zegesi zihlala zikukuphela kwendlela yokufumana into ebalulekileyo, nokuba kukutya okanye izinto zokuhlamba. Njengenxalenye yalo naluphi na uhambo olude lwemoto, izikhululo zegesi nazo zinokumela ukujikeleza kunye nokuzonwabisa.
Kuxhomekeke kwinto yokuba isikhululo segesi sithetha ntoni ephupheni, nokuba ulidibanisa nenkululeko okanye ungcoliseko lokusingqongileyo, lunokutolikwa ngokwahlukileyo njengophawu lwephupha.
1 Uphawu lwephupha «isikhululo segesi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isikhululo segesi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isikhululo segesi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isikhululo segesi» - ukutolikwa ngokubanzi
Isitishi segesi yindawo apho uhlala khona galela kwaye sixhobise uhambo oluya phambili. Njengophawu lwephupha, ke ngoko, libonisa ukuba iphupha lizanelisa nje iimfuno zakho kwaye uqhubeka ebomini ngamandla amatsha, okanye kufuneka uthathe ikhefu ngokukhawuleza kwaye uphinde ufumane amandla owasebenzisileyo. Udiniwe kwaye unesibindi kakhulu. Kule meko, kufuneka ucinge malunga noko kukugubungeleyo kunye nendlela onokufumana ngayo amandla kwakhona.
Ipetroli, ezalisa iphupha kwisikhululo segesi, inempawu ezinobungozi. Yi Isizathu y amandlaNangona kunjalo, ikwanokutsha kakhulu, ngakumbi ukuba iphethwe ngokungakhathali. Ingabonisa inkcitho yamandla okanye ukutsha kancinci kodwa uthando lwexeshana.
Ukuba iphuli yepetroli okanye isikhululo segesi sonke siyatsha ephupheni, oku ayisosizathu senkxalabo, kodwa kubonisa ulonwabo.
Ukubona isikhululo segesi kwezinye iimeko kubonisa into esondeleyo Ukubeka okanye umnqweno wokunxila kwakhona kwakhona kungekudala. Kukwasebenza kwanjalo kuyo ukuba iphupha lelakho okanye lisebenza kwisikhululo segesi. Ukubona ikepusi kwisikhululo segesi kuhlala kubonisa ukuba umntu ophuphayo akafuni ukuzibophelela kwinto nayiphi na ukufezekisa iinjongo zabo.
Uphawu lwephupha «isikhululo segesi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuze utolike ngokwasephupheni ngokwasemphefumlweni, kuya kufuneka unike ingqalelo ekhethekileyo kwindlela oziva ngayo ngendawo kwaye zeziphi iinkumbulo onxulumene nazo. Isitishi segesi sibonisa ukuba kunokwenzeka Ukugcwalisa kwakhona iibhetri zakho kwaye uzalise oovimba bakho.
Ngaba unako ukufaka ipetroli ngaphandle kweengxaki okanye ngaba amafutha awunanto? Ukuba uziva usoyikiswa okanye ungonwabi xa ubonile, inokuba luphawu lokuba umntu othile uchitha amandla akho okanye ukunqanda ungaphumli. Ukuba, ngokuchaseneyo, yonke into ihamba kakuhle, kunokwenzeka ukuba uya kuzikhathalela kwaye ujonge ukubekeka kwamandla.
Uphawu lwephupha «isikhululo segesi» - ukutolika kokomoya
Kananjalo ngengqondo yokomoya, isikhululo segesi ephupheni sithetha ukuvuselela amandla asetyenzisiweyo. Indlela yokomoya ihlala inzima kwaye ungayidinga. Descansoukubuyisa amandla kunye nokucwangcisa ulwazi olufunyenweyo.